सायद सबैभन्दा लोकप्रिय लागूऔषधको एक - किनभने कम्तिमा जीवनमा एक पटक सबैलाई यी कालो चक्की को मद्दत खोजे, कार्बन सक्रिय छ। त्यहाँ एक दबाइ छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद केही के सक्रिय कार्बन को प्रयोग को लागि सङ्केत गर्छ, साथै चिकित्सा मन्त्री हरेक गृहिणी मा संग सम्बन्धित कुनै पनि contraindications छन् थाहा छ।
तयारीको को विवरण
सक्रिय कार्बन - थप रासायनिक प्रशोधन गर्न हावा पहुँच बिना विशेष प्रविधिले कोइला वा पीट यो दबाइ बनेको छ किनभने, प्रकृति नै सिर्जना, एक अद्वितीय adsorbent छ। यो दबाइ को संरचना porous छ, त्यसैले सक्रिय कार्बन बिल्कुल toxins को शरीर प्रदर्शन गरिएको छ। दानाको, पाउडर, पाटी, र granules समाधान तयारी वा पेस्ट, orally लिएको छ जसको लागि: को दवादारू "सक्रिय कार्बन" विभिन्न प्रकारका उपलब्ध छ।
प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ सक्रिय कोइला को फरक छ, हामी पछि तिनीहरूलाई हेर्न हुनेछ। हामी सुरु गर्न कसरी यो दबाइ काम गर्दछ बुझ्न पर्छ। कारण विशेष उपचार गर्न सक्रिय कार्बन जसबाट यसको अवशोषण गुण वृद्धि यसको porous संरचना, सुधार गर्छ। यो दबाइ को यो सुविधा उसलाई चाँडै विभिन्न ब्याकटेरिया toxins, बिष, alkaloids, allergens र अन्य हानिकारक पदार्थ को शरीर छुटकारा मदत गर्छ छ। यो उपाय आवेदन पछि लगभग 30 मिनेट सुरु हुन्छ।
सक्रिय कार्बन को प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
प्रायजसो, दबाइ यस्तो यस्तो पखाला, नशा, flatulence, गरिब स्वागत खाना परिणामस्वरूप आंतों colic रूपमा रोगहरु र विकार रूपमा, पाचन प्रणाली संग सम्बन्धित विकार मा प्रयोग गरिन्छ। तर सक्रिय कार्बन को प्रयोगको लागि अन्य सङ्केत गर्छ छन्:
- आंतों संक्रमण: साल्मोनेला, झाडापखाला र अन्य;
- एलर्जी प्रतिक्रिया: angioedema, urticaria, खाना एलर्जी र atopic dermatitis;
- विषाक्तता को विभिन्न प्रकार: उत्पादन, भारी धातु, लागूपदार्थ, रक्सी, narcotic र psychoactive पदार्थ को लवण;
- नशा को संकेत: पखाला, flatulence, hyperacidity;
- hepatitis: पुरानो र तीव्र कलेजो cirrhosis, गुर्दे विफलता, typhoid, हैजा;
- चयापचय विकार;
- सक्रिय कार्बन, र राम्रो तरिकाले तैयार पानी र लावा को शरीर प्रदर्शन रूपमा वजन पनि सम्बन्धित छन्।
दबाइ को प्रयोग गर्न होस र contraindications
त्यसैले हामी बाहिर यो छ के को लागि, के सक्रिय कार्बन फेला, त्यो छ आवेदन गर्न कुनै पनि संकेत। तर चाहे यस सरल र सस्तो उपकरण मा contraindications छन्? उदाहरणका लागि, peptic अल्सर, ulcerative संबंधी बृहदांत्रशोथ उपस्थिति, साथै अतिसंवेदनशीलता दबाइ गर्न: कुनै कुरा उपयोगी सक्रिय कार्बन कसरी, यो अझै पनि एक दबाइ छ, त्यसैले, कुनै पनि अन्य लागूपदार्थ जस्तै, यो अवस्थामा जहाँ यो लिन निषेध गरिएको छ को एक नम्बर छ। जब सक्रिय कार्बन प्राप्त देखा पर्न सक्छन् साइड इफेक्ट कब्जियत वा पखाला, भिटामिन कमी समावेश गर्नुहोस्।
सक्रिय कार्बन - धेरै लाभदायक गुण छ जो एक धेरै नै सरल र सस्तो माध्यम छ। यो औषधीले पक्कै किनभने यो निर्धारण बिना कुनै पनि फार्मेसी मा खरिद गर्न सकिन्छ, प्रत्येक परिवार मा चिकित्सा मन्त्री हुनुपर्छ। तर आवेदन अघि अझै पनि निर्देशनहरू पढ्नुहोस् गर्नुपर्छ, र तपाईं प्रश्न र शङ्का छ भने एक विशेषज्ञ उल्लेख गर्नुपर्छ।
"Gelmifag": प्रयोग, संरचना, समीक्षा लागि निर्देशन
"Levomekol" लेप। समीक्षा, अध्ययनहरू
औषधि 'Prospan' निर्देशन, जारी फाराम, संरचना
"Ateroklefit" दबाइ। प्रयोगको लागि निर्देशन
असामान्य दबाइ "एएसडी अंश-2।" उहाँको बारेमा प्रतिक्रियाहरू
काम-किताब: कसरी प्राप्त गर्ने? काम पुस्तकहरू issuing र भण्डारणका लागि नियम
Austenite - यो के हो?
मालिश क्रीम: छनौट लागि सुझाव
शैल प्लाईवुड formwork: उपभोक्ताहरु लागि रोचक जानकारी
1 C लिनक्स 8.2
"STIVARGA" (regorafenib) analogues मूल्य। सस्ता Stivarga कहाँ किन्न?
तपाईं यो सीतनिद्रा भनेर थाह थियो?
Louvred ढोका - भविष्य निर्माण
"Phenylbutazone" (ट्याब्लेट): प्रयोग, analogues, मूल्य र समीक्षा लागि निर्देशन